Sakaria 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Yosua Atemmufo Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ahene 2 Ahene 1 Beresosɛm 2 Beresosɛm Esra Nehemia Ester Hiob Dwom Mmebusɛm Ɔsɛnkafo Solomon Dwom Yesaia Yeremia Kwadwom Hesekiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadia Yona Mika Nahum Habakuk Sefania Hagai Sakaria Malaki Mateo Marko Luka Yohane Asomafo Nnwuma Romafo 1 Korintofo 2 Korintofo Galatifo Efesofo Filipifo Kolosefo 1 Tesalonikafo 2 Tesalonikafo 1 Timoteo 2 Timoteo Tito Filemon Hebrifo Yakobo 1 Petro 2 Petro 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda Adiyisɛm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 Afei memaa m’ani so hwɛe bio, na mihuu nhoma mmobɔwee bi a atu nam wim.+ 2 Enti obisaa me sɛ: “Dɛn na wuhu?”+ Ɛnna mekae sɛ: “Mihu nhoma mmobɔwee bi a atu nam wim. Na ne ntwemu yɛ basafa aduonu na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa du.” 3 Afei ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Eyi ne nnome a afi adi kɔ asase nyinaa so,+ efisɛ obiara a ɔbɔ korɔn,+ sɛnea wɔaka wɔ nnome a ɛwɔ nhoma mmobɔwee no fã biako mu no, afa ne ho adi. Na obiara a ɔka ntam nso,+ sɛnea wɔaka wɔ nnome a ɛwɔ ɔfã foforo mu no,+ afa ne ho adi. 4 ‘Me na mama afi adi, na ɛbɛkɔ ɔkorɔmfo ne nea ɔde me din ka ntanhunu no fie;+ na ɛbɛtena hɔ na asɛe fie no, emu nnua ne abo nyinaa,’+ Asafo Yehowa asɛm ni.” 5 Na ɔbɔfo a ɔne me kasae no ka kyerɛɛ me sɛ: “Mesrɛ wo ma w’ani so hwɛ nea afi adi rekɔ yi.” 6 Ɛnna mibisae sɛ: “Ɛyɛ dɛn?” Na ɔkae sɛ: “Ɛyɛ efa susude na afi adi rekɔ.” Na ɔtoaa so sɛ: “Eyi ne wɔn hwɛbea wɔ asase nyinaa so.” 7 Na woyii mmuaso kurukuruwa a wɔde sumpii ayɛ no, na mihui sɛ ɔbea bi te efa susude no mu. 8 Enti ɔkae sɛ: “Eyi yɛ Amumɔyɛ.” Na opiaa no san hyɛɛ efa susude no mu,+ na ɔtow sumpii bo kataa ano. 9 Afei memaa m’ani so hwɛe, na mihuu mmea baanu bi sɛ wɔreba a mframa wɔ wɔn ntaban mu. Na wɔn ntaban te sɛ asukɔnkɔn ntaban, na wɔmaa efa susude no so faa asase ne ɔsoro ntam. 10 Enti mibisaa ɔbɔfo a ɔne me kasae no sɛ: “Ɛhe na wɔde efa susude no rekɔ?” 11 Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Wɔde besi fie+ ama no wɔ Sinar+ asase so, na ebegyina na wɔde no akɔto ne tenabea hɔ.”